Ma Doonaysaa In Gacalisadaadu Adduunka Kuugu Jeclaato Oo Dar Alle Ay Kuu Adeecdo, SIDAAN SAMEE - Daryeel Magazine
Ma Doonaysaa In Gacalisadaadu Adduunka Kuugu Jeclaato Oo Dar Alle Ay Kuu Adeecdo, SIDAAN SAMEE
Tus xaaskaaga inaad nafteeda ka jeceshahay naftaada ( markasta tus inaad ihtimaamsiineyso iyada, waayo waxay soo jiideysaa arintaas kalgacal iyo raxmad )
-Noqo mid dhawrsoon, xaaskaagana wey dhawrsoonaan dhawrsada, dumarkiinana haa dhawrsoonaadaane xadiis, Dabari. Iska jir ineey indhahaaga ku dhacaan xaraanta!Waxaa laga hayaa nin ka mid ah dadkii salafka ahaa inuu yiri markaan danbi sameeyo waxaan ka arkaa xaaskeyga iyo daabadeyda danbigaas daryeelmagazine.com.
-Dareensii xaaskaaga inay ku sugantahay nabadgaliyo iyo kalsooni, markasta ineey ogaato isna dhahdo xaasku ninkaagii ayaa kaa danbeeya. -Iska jir beenta, sababtoo ah beenta waxay furo u tahay ineey dumiso guryo badan, tusaale ahaan ninmanka qaar ayaa iska imanaya wakhti danbe cudur daar la aan, markaas ayuu ninku wuxuu isku dayaa inuu sheego been si uu u raali galiyo xaaskiisa.
-Joogto ka dhigo daganaanshaha, hana cadhoonin, sabaabtoo ah cadhadu waxay aasaas u tahay kalgacal la aanta iyo naceybshaha, hadeey kugu khaldantana u cudur daar hana seexanin adoo u cadhoonaya, daryeelmagazine.com ayaa ku leh waxaadna xasuusataa wanaagii fara badnaa ee adi iyo xaaskaaga idin soo kala dhexmaray.
-Ka qaado xaaskaaga ra yiga lana tasho siduu ahaan jirayba Rasuulka scw. Ilaahay kheyrka haa nagu sugo, aaamiin.
-Ha faafinin xaaskaaga ceebaheeda, haba yaraatee siiba dadka dhexdooda.
-Isku day inaad xaaskaaga amaanto, kuna mahdiso markay wax wanaagsan sameyso, wuxuu yiri nabiga scw qofkaan ku mahdinin dadka Ilaahay kuma mahdiyo.
-Xaaskaaga ugu yeedh magac aad ku koolkoolineysid, siduu Rasuulka scw caaisha ugu yeedhi jiray yaa Caish.
10 Talo Oo Kuu Horseedaya Guul Dhanka Waxbarashada Ah XUSUUSIN: Alle oo Dambi Dhaaf La Weydiisto Keliya Ayaa Looga Bixi Karaa Dhibaatooyin Badan Alle Talo Saaro mar kasta! 7 Tallaabo Oo Kuu Sahli Kara In Riyadaadu Kuu Rumowdo